Somaliland: Guddida Doorashooyinka Oo Mudada Kaadh Qaybinta U Kordhiyay Gobollada Bariga | #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Somaliland: Guddida Doorashooyinka Oo Mudada Kaadh Qaybinta U Kordhiyay Gobollada Bariga
#Hargeysa(ANN)-Guddida Doorashooyinka Qaranka, ayaa mudada kaadh qaadashada ee wejigii koowaad u kordhiyay saddexda gobol ee Bariga Somaliland, kuwaas oo kala ah Sanaag, Sool iyo Saaxil, kadib markii ay dhammaatay mudadii hawsha kaadh qaadashada. ee laga bilaabay gobolladaa 11 March 2021.
Guddida doorashooyinka Somaliland, ayaa sheegay in maalmaha la kordhiyey degmo walba oo ka tirsan saddexdaa gobol goobo gaar loo cayimay laga sii qaadan karo kaadhadhka maalmaha dheeraadka ah ee la kordhiyay, si ay uga faa’idaystaan muwaadiniintu.
Sidaana waxa lagu xaqiijiyay qoraal kooban oo kasoo baxay maanta Guddida Doorashooyinka Qaranka, wuxuuna qoraalkaa oo nuqul ka mid ah soo gaadhay Shebekaddaha Araweelo News Network, u qornaa sidan:-
“KDQ ayaa ku dhawaaqay Muddada & Goobaha Kordhinta Kaadh-qaadashada Gobolada Saaxil, Sool iyo Sanaag. Muddadii saddexda Cisho ahayd ee hore loogu asteeyey goboladaa ayaa ku ekayd 13 March 2021.” ayaa lagu yidhi, Qoraalka.
Guddida, ayaa sheegay in Cod-bixiyayaasha Is-diiwaangeliyey Diiwaangelintii 2020/2021 amma, kuwii Is-diiwaangeliyey 2016 balse aan wali qaadan Kaadhadhkoodii ay weli haystaan fursad dahabiya oo ay ku doonan karaan Kaadhadhkoodii muddada lagu gudo-jiro maalmaha dheeraadka ee loo kordhiyay.
“Waxay tegayaan Degmadii ay iska Diiwaangeliyeen, gaar ahaana Goobta Kordhinta ee ku cayiman Ogaysiiska NEC, ee hoos ku xardhan.” ayaa lagu yidhi, qoraalka Guddida doorashooyinka Qaranka Somaliland.
Halkan Ka Daalaco Shaxda.